जनशक्ति अभावमा एक्सरे मेसिन थन्कियो
भगीरथ अवस्थी बुधवार, पुस २६, २०७४ 231 पटक पढिएको
जनशक्ति अभावमा थन्किएको पाटन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको एक्सरे मेसिन
बैतडी : जिल्लाको पाटन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा एक्सरे मेसिन जडान भएको पाँच महिना बढी भइसकेको छ। तर एक्सरे मेसिन सञ्चालन गर्ने जनशक्ति अभावमा अहिलेसम्म सेवा सुरु गर्न सकिएको छैन। एक्सरे सञ्चालन गर्ने रेडियोग्राफर नहँदा एक्सरे मेसिन सञ्चालनमा नआएको पाटन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका एचए लोकेन्द्र ऐरले बताए। उनले भने, ‘पाटन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा एक्सरे मेसिन आएको पाँच महिना बढी भइसकेको छ। तर एक्सरे सञ्चालन गर्ने जनशक्ति नहुँदा त्यत्तिकै थन्किएको छ। न बाहिरबाट प्राविधिक पठाइएको छ न भित्रका स्टाफहरूलाई तालिम दिइएको छ।'
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्राप्त भएको एक्सरे जनशक्तिको अभावमा सञ्चालनमा नआउँदा बिमितहरूलाई समेत समस्या भएको छ। ‘स्वास्थ्य बिमा गरेका बिरामीहरू सेवा लिन आउँछन्। समान्य चोटपटक लागेका बिरामीहरू पनि आउँछन्। एक्सरे मेसिन सञ्चालन गर्ने जनशक्ति नहुँदा उनीहरूलाई बाहिर पठाउन बाध्य छौं।' ऐरले भने, ‘मेसिन नभए त मेसिन छैन भनेर चित्त बुझाउन हुन्थ्यो तर मेसिन भएर पनि सेवा प्रदान गर्न सकिरहेका छैनौं।'
गत मंसिरमा जिल्लाको सुर्नया ६ का नारद अवस्थीको छोरीको लडेर हात भाँचियो। उनले छोरीको उपचारका लागि डडेल्धुरा जानुपर्‍यो। ‘पाटनमै मेसिन आएको छ भन्ने कुरा सुनेका छौं। मेसिन सञ्चालन गर्ने जनशक्ति छैन भन्ने पनि सुनियो। त्यसपछि छोरीलाई डडेल्धुरा लगें।' उनले भने ‘पाटनमै एक्सरे सेवा सुरु भएको भए हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो।'
नारद जस्तै सेवा लिने सैयौं बिरामीलाई फर्काउनु परिरहेको पाटन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले जनाएको छ। ‘सामान्य चोटपटक लागेको भए पनि जिल्ला अस्पताल र उपक्षेत्रीय अस्पताल डडेल्धुरा रेफर गर्न बाध्य भएका छौं।' ऐरले भने।
उता केशरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको एक्सरे मेसिन पनि पाटन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमै थन्किएको छ। ‘मेलौली एक्सरे आएको कागज मात्रै पुगेको छ, मेसिन पुगेको छैन।' केशरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका एचए मुकेश दयालले भने, ‘एक्सरे मेसिन आए पनि एक्सरे सेवा सञ्चालन गर्ने जनशक्ति छैन।'
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले बैतडीको हकमा जिल्ला अस्पताल, पाटन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र केशरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई उपचार सेवा दिने अस्पतालमा सूचीकृत गरेको छ। स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत एक्सरे सेवासमेत राखिएको छ। तर जनशक्ति अभावमा सेवा सुरु हुन सकेको छैन। ‘बिमित मात्रै हैन, एक्सरे मेसिन सञ्चालनमा ल्याउनसके सबैलाई राम्रो हुन्थ्यो। सानो चोटपटक लागेमा बाहिर रेफर गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता पनि हट्थ्यो।' उनले भने।
मंगलवार, माघ २, २०७४ नर्स आन्दोलन : चिकित्सक आफैं गर्छन् नर्सको काम
मंगलवार, माघ २, २०७४ निशुल्क वितरणको स्लाइन विक्रीमा
मंगलवार, माघ २, २०७४ अध्यक्ष ओली बिहीबार फर्कने
सोमवार, माघ १, २०७४ जाजरकोट महामारी : मरेपछि ‘भर्बल अटोप्सी’ !
आइतवार, पुस ३०, २०७४ कुडारी स्वास्थ्य चौकीमा निशुल्क ल्याव सेवा
शनिवार, पुस २९, २०७४ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमै सिटी स्क्यान छैन
शनिवार, पुस २९, २०७४ अवैध रूपमा सञ्चालित १४ औषधि पसलमा सिल
शनिवार, पुस २९, २०७४ स्वास्थ्य चौकीमै बस्दैनन् स्वास्थ्यकर्मी
आर्थिक सहायतामा छानबिन माग, फेरि थपियो ३४५ जनाको सूची 639
लामा काठ नहुँदा पुनर्निर्माण ढिलो 148
सुमार्गीको आरोप, ‘सिरोहियाले ब्ल्याकमेलिङ गरे’ 1760
प्रदेश प्रमुख र अस्थायी केन्द्र आज तोकिने 2199
सडक घुम्तीमा ऐनाले दुर्घटना कम 714
जोखिमपूर्ण भवनबाटै सरकारी काम 275
नैतिकताको कसीमा कांग्रेस 601
अधिनायकवादको दिग्विजय यात्रा 517
पहिचान राजनीतिका संकट 497
महिलाको शव फेला 51
फिर्ता भएका माओवादी मन्त्री अझै सरकारमा ! 262
बाघको छाला र हड्डीसहित दुई पक्राउ 124
चिसोका कारण थप एकको मृत्यु 97
घुससहित इन्जिनियर पक्राउ, नासु र खरिदारलाई मुद्दा 484
तुमगाउँ छाउगोठ मुक्त 132
केही घण्टामै डुब्यो फेसबुकको २५ अर्ब डलर 7347
भित्रियो चिनियाँ इन्टरनेट, तोडियो भारतीय एकाधिकार 1784
१३ वर्षीय केल्भिनले बनाए ड्रोन 1596
मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता ३० लाख 916
नेपाल टेलिकमको मोबाइल नेटवर्क सुचारु 1975
दुई दिनदेखि टेलिफोन सेवा अवरुद्ध 1153